Shiinaha Dufan adag oo cufan leh baasaboorka gogosha bannaanka soosaarka iyo Warshad | Bamboo Dahab ah
Gogosha bannaanka ee adag oo cufan leh
Inta badan guddiyada gogosha bamboo ee REBO waxaa lagu dhisay 1.86m, 2.2m iyo 2.5m ama in ka badan oo dherer ah (6.1, 7.2, 8.2 feet) loox, iyo dhererkan caanka ah waxay ku yimaadaan qiimo qaali ah. Dherarkaas dhexdooda, 1.86m waa dhererka ugu fiican ee caadiga ah waana dhererka ballaaran ee la isticmaalo. Isticmaalka looxyada dhererka gaagaaban ayaa kuu badbaadin kara ilaa 25% marka la isku qurxiyo.
Boodhadhka bamboo-gacmeedka wuxuu leeyahay astaamo badan: xoog leh, adag, cufnaan sare, xasillooni sarreeya, waara, iwm. Astaamaha noocan oo kale ah waxay ka dhigayaan maadadda mid adduunka oo dhan caan ka ah. Waxaa taas ka sii muhiimsan, waa shey bey'adeed u roon oo yareynaya jarista baaxadda leh, waayo bamboo waxay leedahay xilli dhaqsiyo koraya oo dib ayey isu cusbooneysiin kartaa ka dib goynta, si kastaba ha noqotee qoryaha ayaa leh muddo aad u dheer oo sii kordheysa (in ka badan 25 sano), si goos goos ah u gooyn qoryaha ayaa si xun u baabi'in doona keynta iyo deegaanka. Taasi waa sababta maadada bamboo si ballaadhan loogu adeegsado dhinacyo badan maalmahan.
Way cadahay in alwaaxda kuleylaha ah aan meesha laga saari karin sababaha deegaanka awgood. Runtu waxay muujineysaa in guddiga loo yaqaan 'REBO de' Bamboo decking looxyadu ay buuxinayaan dhammaan shuruudaha: Waxaa lagu kala saaraa fasalka cimri dherer 1 waxayna isticmaalaan fasalka 4 sida ku xusan EN350 / EN335, oo lagu carfiyey fasalka dabka ee Bfl-s1 sida ku xusan EN 13501-1. Looxyadu waxay la kulmaan heerka yurubiyanka E1, siideynta formaldehyde ee hawada waa 0.05mg / m3 sida ku cad EN 717-1. Bamboo dhab ahaantii wuu ka xoog badan yahay uguna cimri dheer yahay qoryaha, taas oo ka dhigaysa wax ku habboon dhismaha meelaha bannaanka loogu nool yahay sida dekkooyinka iyo barxadaha.
Inta badan guddiyada gogosha bamboo ee REBO waxaa lagu dhisay 1.86m, 2.2m iyo 2.5m ama in ka badan oo dherer ah (6.1, 7.2, 8.2 feet) loox, iyo dhererkan caanka ah waxay ku yimaadaan qiimo qaali ah. Dherarkaas dhexdooda, 1.86m waa dhererka ugu fiican ee caadiga ah waana dhererka ballaaran ee la isticmaalo. Isticmaalka looxyada dhererka gaagaaban ayaa kuu badbaadin kara ilaa 25% marka la isku qurxiyo. Marka ha u maleynin in waqtiga dheer uu yahay kan ugu fiican. REBO waxay kuu soo jeedineysaa inaad qaadato dherer dhan 1.86m, taas oo caan ka ah adduunka oo dhan. Nidaamka cadaadiska gaarka ah ee 'REBO' ee kaarboon kaaryeynta iyo kuleylka kulul wuxuu abuuraa cufnaan sare, jawi bey'adeed leh, xasilooni iyo adkeysi waarta. Nidaamka carrabka iyo jeexjeexyada wuxuu bixiyaa hab wadajir ah oo sahlan. Dhinacyada jeexjeexan waxaa lagu rakibi karaa boodhadh bir bir ah oo aan muuqan waxayna muujinayaan muuqaal qurux badan iyagoon arkin clips-yada.
Hore: Cadaadis kulul oo tayo sare leh sagxadda bamboo culus
Xiga: Qalabka baasaboorka adag ee toosan ee darbiga hore